दैनिक बिहान खाली पेटमा किशमिशको पानी खानुहोस्, शरिरमा हुनेछन् यस्ता फाइदाहरु… – Online Nepal
दैनिक बिहान खाली पेटमा किशमिशको पानी खानुहोस्, शरिरमा हुनेछन् यस्ता फाइदाहरु…
अंगुरलाई सुकाएर किशमिश बनाइन्छ । यसमा आइरन, पोटाशियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फाइबरको पार्याप्त मात्रा हुन्छ । यसकारण यसलाई स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । तर आयुर्वेद अनुसार दैनिक किशकिशको साटो यसको पानी पिउँदा धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।भारतका आयुर्बेद एक्सपर्ट अबरार मल्तानीका अनुसार किशमिसमा गुलियो मात्रा बढि हुने भएकाले रातभरी यसलाई भिजाएर राख्दा यसको गुलियो पन कम हुने र पौष्टिक तत्वमा वृद्धि हुन्छ ।
कसरी बनाउने किशमिशको पानी:
१. किशमिश एक उत्कृष्ट डिटक्स गर्ने ड्राइफ्रुट हो । यसको पानीले शरिरको सबै टक्सिन बाहिर निकाल्ने गर्दछ ।२. किशमिशमा प्रचुर मात्रामा फाइबर पाइन्छ जसले पाचन क्रियामा सहयोग पुर्याउँछ । यसको पानी पिउँदा पाच क्रिया सही हुन्छ ।३. किशमिशमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । जसका कारण मुखको दुर्गन्धलाई टाढा राखेर घाँटीको संक्रमणबाट जोगाउँछ ।
४. किशमिशमा क्याल्सियम र माइक्रो न्यूट्रियन्ट पाइन्छ । यसले हड्डी र जोर्नी बलियो राख्न सहयोग गर्दछ ।५. यसमा आइरनको मात्रा पनि प्रचुर हुन्छ । त्यसकारण किशमिश र यसको पानी खाँदा शरिरमा रगतको मात्रा बढ्छ जसले रक्तअल्पत्ता हुनबाट जोगाउँछ ।६. किशमिशमा फाइबर र अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ जसले कोलेस्ट्रोलको स्तरलाई नियन्त्रित गरेर मुटु रोगबाट पनि जोगाउँछ ।
Prevआज २०७७ असार २१ गते आइतबारको राशिफल
Nextकक्षा ११ को परीक्षाबारे आयो यस्तो खबर
८ वर्षको छोरा लिएर अर्कैसंग हिडेकी राधाले, पहिलो श्रीमानलाई छोरा फिर्ता गर्दा देखियो यस्तो दृश्य (भिडियो)